Honor Magic Watch 2, batari, qiimo fiican iyo wax badan oo dheeraad ah | Wararka Gadget
Rafa Rodriguez Ballesteros | | qalabka, Smartwatch
Maamuusku wuxuu soo saaray nooca cusub ee casriga ah. Waxaan ogaanay kan Maamuus Magic 2 maxaa yimaada warar xambaarsan. Qaarkood waxay jecelyihiin cusboonaysiinta naqshadeynta waa iska cadahay. Iyo astaamo kale, inkasta oo aynaan ku arki karin isha qaawan, ka dhig noockan cusub mid si muuqata uga wanaagsan kii hore.
Mid ka mid ah astaamaha ugu fiican waa ismaamul weyn taas oo awood u leh inay bixiso batterigeeda. Ilaa 2 usbuuc oo adeegsi aan kala go 'lahayn Looma baahna in lacag laga qaado noocyada ugu waaweyn. Nambarada qaarkood oo dhex dhigaya smartwatches-ka oo leh madax-bannaanidooda suuqa hadda jira.
1 Honor Magic Watch 2, baytariga laba toddobaad
2 Honor Magic Watch 2, qiimo wanaagsan iyo wax ka badan
Honor Magic Watch 2, baytariga laba toddobaad
In kasta oo sidaan dhahno, mudada ay ku jirto baytarigeeda ay ahayd mid ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan, Magic Watch 2 sidoo kale waxay u taagan tahay dhinacyo kale. Furaha lagu gaarayo madaxbannaanida sidan ayaa ah in la helo si aan kala go 'lahayn loo hagaajiyo nidaamka qalliinka si hawlgalkaagu u socdo.
Processor-ka la doortay maxaa yeelay daawadan cusub ee 'Magic Watch' waa Kirin A1. A processor oo u taagan ficil ahaan waxba. Laakiin maxaa jiray loo sameeyay si gaar ah aaladaha noocan ah taasina waxay ku fulisaa himiladeeda dhammaystirka xallinta oo bixiya khibrad aad u soo jiidasho leh.
Waan helnay laba nooc cabbirro kala duwan, sidoo kale leh xallinta kala duwan. Shaashadda 42mm oo leh xallinta pixel 390 x 390, iyo shaashadda 46 mm, iyadoo lagu xallinayo 454 x ppm X XUMAY. Ku saabsan naqshadeynta, qaabkan cusub ee 'Magic Watch', a qaab ka xarrago badan oo la safeeyey. In kastoo adigoon ka tanaasulin dheefaha loogu talagalay isticmaalka isboortiga aad u badan.
Honor Magic Watch 2, qiimo wanaagsan iyo wax ka badan
Waxaan weli sugeynaa ilaa iyo bartamaha Diseembar si aan u helno sharafta cusub ee la qaadan karo. Laakiin waxaan horay u ogaanay qiimaha waa inaan bixinaa mid kasta oo noocyadeeda ah. Nooca ugu yar, 42mm ayaa ku kici doonta qiyaastii 179 euroiyo nooca ugu weyn, 46mm, 189 euros. Qiimayaasha u muuqda kuwo macquul ah marka la eego muuqaalada iyo naqshada ay na siinayaan.
Waxaan haysan doonaa marka lagu daro wixii aan horey kuugu soo sheegnay, garaaca wadnaha iyo dareeraha fibrillation ee wadnaha. Isku xirnaanta Bluetooth 5.1, codbaahiye lagu dhex dhisay iyo afhayeenka, GPS-laba-jibaarayaasha, iska caabbinta biyaha iyo howlaha badan ee NFC. Sida aan u aragno gabi ahaanba wax aan seegi doonin. Shaki la'aan, Maamuusku wuxuu si xoog leh u sharxayaa qalab aad u dhameystiran oo diyaar u ah inuu sheegto booskiisa qaybta. Hadiyaddii Kirismaska ​​ee aad raadineysay?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Maamuusku wuxuu soo bandhigayaa Magic Watch 2
Heshiisyada otomaatiga ah ee ugu fiican guryaha Jimcaha
Tone Ultra iyo Tone Firfircoon +, tani waa noocyada dhegaha leysku xiro LG